NOOCYADA WARAABINTA IYO QUUDINTA CANAB EE XILLIGA GU'GA, BANNAANKA U TILMAAMAYA - CANAB
Sidee Biyaha iyo quudinta canab guga
Maantana waxaan ka hadli doonaa sida biyaha iyo quudinta canabku guga. Milkiilayaal badan oo ku hawlan beerashada canab toban sano, waxay u caanbileeyaan daryeelka qaarkood ee geedka canabka ah. Si kastaba ha ahaatee, cimiladu waa isbeddelaysaa, xaaladaha cimiladu waxay la wadaagaan la'aanta baahida nafaqooyinka ah ee yareeya dhalidda dalagga iyo "abaalmarinta" canab leh cudurro kala duwan. Waxaan fahmi doonaa nooca waraabinta canabku u baahan yahay guga, iyo haddii ay tahay mid u qalma in la sameeyo qadar ballaadhan oo bacarimis ah oo leh Bacriminta dabiiciga ah.
Astaamaha caleemaha waraabinta guga
Aynu bilowno waraabinta canab ee guga, kaas oo lagu fuliyo muddooyinka qaarkood iyo, sida caadiga ah, siyaabo kala duwan.
Goorta la bilaabayo
Iyada oo waraabka beeraha canabka ah guga, wax walbana maaha mid cad. Xaqiiqdu waxay tahay in haddii dhulka uusan ku filnayn qoyaan ka dib jiilaalka (barafka leh baraf yar), ka dibna waraabinta waraabka waa in la sameeyaa. Tani ma aha oo kaliya qoyaanka qaybta sare ee dhulka, laakiin "siinta" qoyaanka si qoto dheer.
Waa muhiim! Waraabinta biyaha lagu wareejiyo biyaha ayaa la sameeyaa labadaba xilliga guga iyo dayrta, haddii ciidku ka baxo qoyaanka.
Biyaha waa in lagu shubaa daboolka iyo godadka dheecaanka ee qiyaasta 200-300 litir baadiyaha. Biyo badan oo ka mid ah biyaha ayaa qoyi doona dhul qalalan oo u oggolaanaya beeraha canabka ah inay dhaqso u toosaan jiilaalka ka dib.
Hubi noocyada caleemaha sida "Gala", "Annie", "Helios", "Talisman", "Chameleon", "Moldova", "Zabava", "Novocherkassk Anniversary", "Arcadia", "Augustine", "Kesha" "," Delight "," Lily Dooxada. "
Haddii ciidda la qoyo qoyaan, ka dibna samee waraabinta noocan oo kale ah ma aha oo kaliya aan loo baahnayn, laakiin si adag loo mamnuucay, sababtoo ah adigoo ku shubaya dheecaanka xad dhaafka ah ee ciidda, waxaad ka soocaysaa oksijiinka, taas oo ka dhalan karta xididada aan si caadi ah u neefsan karin.
Waa muhiim! Waraabinta waxaa lagu sameeyaa biyo diirran si loo dedejiyo dhismaha kelyaha. Haddii geedi socodku u baahan yahay in hoos loo dhigo, markaa biyaha qabow waxaa la siiyaa nidaamka waraabka.
Waraabinta guga qasabka ah waxaa la sameeyaa 20 maalmood ka hor ubax. Gobol kasta, ubaxu wuxuu dhici karaa waqtiyo kala duwan, sidaas darteed taariikhda saxda ah ee aynaan sheegin. Waxaad si toos ah ugu fidi kartaa xididada, haddii beeritaanka ay qabsadaan aag yar. Haddii beeraha canabka ah ay degaan dhowr digrii oo dhul ah, ka dibna waxaan siineynaa qoyaan ka soo jeeda qulqulka iyo tuubooyinka biyaha. Qiyaasta codsiga - 200 litir kedis ah. Waxaan soo aragnay goortii ay ku mayraan canabkii guga, ka dibna waxaan ka hadli doonaa dulqaadashada abaaraha ee dalagga.
Canab ma u eg yahay qoyaan?
Canabku waa dhirro qoyan oo qoyan, oo u baahan qadar badan oo biyo ah inta lagu jiro waraabka, hase yeeshee qulqulka qoyaanku wuxuu leeyahay saameyn xun oo ka yar tan la'aanta.
Xaqiiqdu waxay tahay in haddii geedka canabka ah uusan helin qoyaan ku filan marka uu waraabiyo, markaa xididdadiisa waxay bilaabaan inay si qoto dheer u galaan ciidda iyaga oo raadinaya biyo. Haddii aysan jirin lakab dhoobo ah oo gobolkaaga ka mid ah oo aan u oggolaan doonin xididada in ay si qotodheer u socdaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad ka walwasho in canabku uu qalajin doono todobaadyada kulul.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad wax ka barato cudurrada caadiga ah ee canab, gaar ahaan cuncunka iyo xayrta.
Ma aha oo kaliya xasilloonaanta geedka canabka ah, laakiin sidoo kale heerka ilaalinta waxay ku xiran tahay qoto dheeraanta nidaamka xididka. Haddii geedku helo qadar ku filan oo biyo ah inta lagu jiro waraabinta nidaamsan, ka dibna canabku wuxuu horumariyaa nidaam asaasiga ah, taas oo ay ku jirto xaaladaha miraha daran si dhaqso ah u qaboojin doona, dhaqankuna wuu dhimanayaa. Haddii la'aanta qoyaanka ay keento xididada si ay u tagaan dhowr mitir oo qoto dheer, xitaa dhaxan daran ayaa u horseedi doonta burburka dhamaystiran ee geedka.
Waxay u egtahay nooc ka mid ah cilladda: in la siiyo canab si sax ah biyaha iyo helitaanka goosashada wanaagsan iyada oo aan halis ugu jirin beeraha canabka ah mar kale, ama si loo tijaabiyo xoog, taas oo ilaalin doona dalagga ee rhizomes barafoobay.
Waa muhiim! Vine waxay u adkeysan kartaa heerkulka ilaa 30°C, si kastaba ha ahaatee, cagaarshow kasta wuxuu ku xakameyn doonaa xataa xitaa dhaxan yar.
Waxaa jira laba siyaabood oo muhiim ah oo lagu waraabiyo canabka:
Qaab walba wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo loo isticmaalo hal dhinac ama mid kale - taas oo ku xidhan cimilada, heerkulka hawada, aagga beerta iyo doorbididda hargabka doofaarka.
Qaabka waraabka waraabka ayaa loo qaybiyaa kala duwanaanta soo socota:
bixinta biyaha ee ceelasha caadiga ah;
waraabinta hal god oo kaliya, oo ku yaalla meel kasta oo baadiyaha ah.
Waraabinta waraabka ku haboon xirfadlayaasha haysta waqti iyo aqoon ku filan si loo dhiso nidaam noocaas ah. Dhuumaha biyaha lagu wareejiyo waxaa laga qaadi karaa labada silig iyo dhulka. Doorashadani waxay ku habboon tahay carrada culus ee aan u oggolaanin hawada inay maraan.
Ku waraabiyo haraaga caadiga ah. Ku habboon yihiin geedo waaweyn oo canab ah, marka ay si aan macquul ahayn u tahay inay si gooni ah u biyo u cabbaan baadiyaha kasta. Doorashadani uma baahna kharashka qalabka, laakiin isticmaalka biyaha ee waraabinta laguma magacaabi karo mid caqli-gal ah.
Baro sida loo gooyo canabka guga.
Waraabinta godadka hal mar. Xulashada ugu wanaagsan ee ku habboon geed canab ah oo beerto. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha noqotee, nadiifinta biyaha, sida haddii ay dhacdo, warshad waliba waxay heli doontaa caadadeeda.
Haatan waxaan ka wadahadalnay qulqulka dhulka hoostiisa, taas oo ah mid aad u caan ah oo leh dhawr fursadood oo lagu fulinayo:
godadka tooska ah;
Tuubbo toosan. Mawaaqu waa in ku dhow daaq kasta (indented 1 m laga soocay godka) god ayaa lagu qoday kaas oo tuubo caag ah lagu geliyo. Dhamaan dhererka tuubada, godadka waxaa lagu sameeyaa iyada oo qoyaanku u dhex gali doono ciidda. Si looga hortago godadka ka soo kabashada, godadka qashinka ama quraarada ayaa ku dhajiya hareeraha godadka. Biyaha waxaa lagu sameeyaa tuubo ama gacmo lagu shubo biyo.
Tube tubada. Habka ugu caansan ee dhowaan loo isticmaalay meel walba. Caannimadu waxay u sabab tahay xaqiiqda ah in aaney biyo ahayn laakiin sidoo kale Bacriminta dareeraha kala duwan ayaa la bixin karaa iyada oo loo marayo tuubbo dhererka dhulka hoostiisa ah.
Boorashka waxaa lagu dhejiyaa qoto dheer oo ah 60-70 cm, godo ayaa laga sameeyaa mitir kasta kaas oo dareeraha uu socon doono. Dhammaan xayiraadyada waxaa lagu xiray agrofibre ama mesh ganaax ah si looga ilaaliyo khalkhalka. Awoodda ku filan waxay ku xiran tahay nidaamka, kaas oo biyo ama isku dar ah Bacriminta, kadibna dareeraha ayaa kulaylka qorraxda ka soo baxa wuxuuna galayaa tuubooyin.
Ma taqaanaa? Daawada, waxaa jira wax sida "ampelotherapy" - daaweynta canab, iyo ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale caleemo, qoryo, iyo wax kasta oo laga qaadi karo geedka this.
Noocyada quudinta canab ee guga
Waxaan u jeednaa guga dhar beerto: waxaan ka wada hadli doonaa fursadaha dharka, taariikhda iyo hababka lagu bilaabo hordhaca. Aynu ka hadalno sida dharka guga muhiimka u yahay dadka curyaaminta ah.
Bacriminta macdanta iyo organic
Aynu bilowno xaqiiqda ah in bacriminta, beeray markii la beero geedo yar yar, waxay socotaa oo keliya 3-4 sano, ka dibna gaajada macdanta ayaa bilaabmaysa, iyo dhirta si fudud ma u awoodaan inay soo saaraan dalagga la rabo iyada oo aan bacrimin dheeraad ah.
Baro wax badan oo ku saabsan daroogada loo adeegsado beerta canabka ah.
Bacriminta oo lagu dabaqo dhaqanka waxay u qaybsan yihiin laba kooxood:
kuwa ugu muhiimsan;
Bacriminta ugu weyn waxaa la isticmaalaa mar 2-3dii sanoba mar. Sealing waxaa lagu sameeyaa horraanta gu'ga ama dayrta. Bacriminta leh isku dar ah biyaha iyo macdanta. Bacriminta dheeraad ah ayaa ah nooc ka mid ah ceymiska ka soo horjeeda xaaladaha cimilada iyo cimilada noolaha. Isticmaalka dareeraha ugu badan ee la isticmaalo.
Maxay ka fiican tahay: Biyaha ama macdanta macdanta?
Wixii canab, dabiiciga dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa la doorbidaa, kuwaas oo lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo digada, compost, peat ama shimbir xaarka. Noocaan Bacrimin ma aha oo kaliya wuxuu siinayaa canabka ah oo dhan macdanta lagama maarmaanka ah iyo nafaqooyinka, laakiin sidoo kale waxay u dhigtaa joogtada ah ee ciidda, ka dhigaysa mid aad u jajaban iyo neefsan.
Bacriminta macdanta ayaa sidoo kale leh faa'iidooyin badan, sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa arrimo dabiici ah. "Biyaha macdanta", oo ku jirta kooxda NPK (nitrogen, fosfooraska, potassium), ayaa ugu haboon, tanina waxay xallinaysaa dhammaan dhibaatooyinka geedcanamka marxalad kasta oo horumar ah.
Waxaa haboon in la xusuusto in haddii aad isticmaasho Bacriminta organic, ka dibna ma jiraan baahi gaar ah oo Bacriminta macdanta. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku quudiso dhirta kaliya Bacriminta macdanta, ka dibna waxay la kulmi doonaan yaraanta walxo kala duwan.
Ma taqaanaa? Si loo soo saaro hal dhalo oo khamri ah, celcelis ahaan, waxaad u baahan tahay 600 canab.
Waxaa soo baxday in arimaha organic waa lagama-maarmaan, sidaas darteed, sanad kasta waa lagama maarmaan in la isticmaalo qiyaasta bacriminta organic.
Shuruudaha dharka samaynta
Dharka ugu sarreeya ee canab ee xilliga guga waxaa lagu sameeyaa shuruudaha qaarkood oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo aad u hoggaansanto.
Ka dib jiilaalka ka hor, ka hor inta aan laga saarin filimka ama hoyga kale ee beerta canabka ah, waxaad u baahan tahay inaad ku darsato duurka iyaga oo isku dar ah superphosphate, amooniyam amase kalluun potash (ama isticmaal bacrimin adag). In 1 litir waxaan u milicsan 2 g of superphosphate, 1 g oo amooniyam iyo 0.5 g oo ah cusbo potassium. Si loo baadho baadiyaha, waa inaad isticmaashaa ilaa 10 litir oo xalkan ah.
Codsiga soo socda ee bacariminta waxaa la fuliyaa 15 maalmood ka hor bilowga ubax. Isticmaal isku isku isku mid ah isla fiirinta (2: 1: 0.5 halkii 1 liter).
Waa muhiim! Quudinta ugu dambeysa waa in la fuliyaa ugu dambeyn 15 maalmood ka hor goosashada.
Xilliga xagaaga waxay sameeyaan quudin dheeraad ah, marka laga reebo qayb ka mid ah nitrogen.
Siyaabaha loo sameeyo
Isticmaalka dharka xididka caadiga ah, oo ku lug leh codsiga Bacriminta ee goobada Pristvolny. Xirmooyinka halbowlaha ah iyo godadka joogtada ah ayaa la karooli karaa. Qodobka shimbirku waa 40-50 cm Waxaa wanaagsan in habkan loo isticmaalo xilliga dayrta, kahor hoyga jiilaalka.
Khidad kale oo loogu talagalay dalbashada bacrimin waa dharka foliar, kaas oo, inkastoo aan awoodin in la badalo qaabka aasaasiga ah, si kastaba ha ahaatee, waxay ka caawisaa dhirta heerar kala duwan. Dajinta sarre ee dheeraadka ah ayaa la keenaa waraabka faleebo ama waraabiyo ka soo baxaya rusheeyaha ama dhalada buufin. Ujeeddooyinkan, ma aha oo keliya 3 walxo macdanta caadiga ah ayaa loo isticmaalaa, laakiin sidoo kale xeryahooda dheeraadka ah, oo ay ku jiraan bromiin, cobalt, manganese, copper, iyo kuwo kale. Waxaa habboon in la yidhaahdo dharka xididka waa aasaasiga: iyada oo aan la hayn, dhirta waxay heli doontaa macdanta aasaasiga ah iyo nafaqooyinka, maadaama bacrimin ay ku jiraan ciidda si fiican ugu niyad jabsan nidaamka xididka.
Tani waxay soo gabagabeyneysaa doodda waraabinta guga iyo quudinta beeraha ku yaal goobtaada. Isticmaal tilmaamaha la soo jeediyay si aad u siisid beeritaankaada qadarka saxda ah ee qoyaanka iyo nafaqooyinka si koritaanka ugu wanaagsan iyo abuurka miro.